BUDDHIST TERMS' Dictionary: SUITABLE OFFERINGS - ဒါန၀တ္ထု
SUITABLE OFFERINGS - ဒါန၀တ္ထု
ဒါန၀တ္ထု (Dᾱnavatthu) - လှူဖွယ်ဝတ္ထု၊ လှူရန်ဝတ္ထုပစ္စည်း။
၀ိနည်းဒေသနာတော်အရ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ၄-မျိုး မှာ -
သုတ္တန်ဒေသနာတော်အရ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ၁၀-မျိုး မှာ -
(၁) အန္နဒါန - ထမင်းအလှူ၊
(၂) ပါနဒါန - အဖျော်ယမကာအလှူ၊
(၃) ၀တ္ထဒါန - အ၀တ်သင်္ကန်းအလှူ၊
(၄) ယာနဒါန - ဖိနပ်စသော ယာဉ်အလှူ၊
(၅) မာလာဒါန - ပန်းအလှူ၊
(၆) ဂန္ဓဒါန - နံ့သာခဲ နံ့သာတုံးအလှူ၊
(၇) ၀ိလေပနဒါန - နံ့သာပျောင်း နံ့သာရည်အလှူ၊
(၈) သေယျဒါန - ညောင်စောင်း, အင်းပျဉ်, အိပ်ရာ, နေရာအလှူ၊
(၉) အာဝသထဒါန - ကျောင်း, ဇရပ်အလှူ၊
(၁၀) ပဒီပေယျဒါန - ဆီမီး, ဖယောင်းတိုင် စသည်အလှူ။
အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်အရ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ၆-မျိုးမှာ -
(၁) ရူပဒါန - ရူပါရုံအလှူ၊
(၂) သဒ္ဒဒါန - သဒ္ဒါအလှူ၊
(၃) ဂန္ဓဒါန - ဂန္ဓာရုံအလှူ၊
(၄) ရသဒါန - ရသာရုံအလှူ၊
(၅) ဖောဋ္ဌဗ္ဗဒါန - ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံအလှူ၊
(၆) ဓမ္မဒါန - အာရုံငါးပါးမှ ကြွင်းသောအလှူ။
The following things are deemed fit to be offered to the members of the Order, namely:
(A) As per the Vinaya, the four items are :
(3) monastic dwelling,
(B) As per the Discourses (Suttanta), the ten items are :
(1) offering of rice,
(2) offering of beverages,
(3) offering of robes,
(4) offering of footwear and other items that facilitate travel,
(5) offering of flowers,
(6) offering of scented woods and fragrant solids,
(7) offering of unguents and scented water,
(8) Offering of beds, couches, bedding, etc.
(9) Offering of monasteries and rest houses, etc,
(10) Offering of lights.
(C) As per Abhidhamma, the six items are :
(1) offerings that haveadecent appearance,
(2) offerings that have an agreeable sound,
(3) offerings that have an agreeable smell,
(4) offerings that are wholesome in taste,
(5) offerings that give ease to the touch such as velvet, silk and mattresses,
(6) offerings other than the five kinds mentioned above.